ओली हटाउने भारतको त्यो चक्रब्यूँह : नेकपाभित्रै देखियो « Pathibhar Online
राष्ट्रिय अखण्डताको सुदृढीकरण गिर्ने पछिल्लो कदम स्वरूप भारतले अतिक्रमित भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समाबेस गरेर नयाँ नक्सा पास गरी संबिधान सशोधनमार्फत निशान छाप समेत संशोधन गरेको छ र नेपालको भुमि भारतले छोडनु पर्ने मााग गरेको छ ।
लामो समयदेखि भारतले कब्जा गरेको भूमि नेपालको नक्शामा समाबेस हुनुको कारण दक्षिण छिमेकी रिसाएको मात्र होइन, सैनिक धम्कीसमेत दिन पछि परेको छैन । बिगत झै भारत प्रधानमन्त्री ओलीलाई पार्टी र सरकारबाट हाटाउन चौतर्फी दबाब श्रृजना गर्दै माइक्रो ब्यबस्थानमा उत्रेको छ । आन्तरिक र बाह्य दुबै ढंगले भारत परिचालित देखिन्छ । बिश्वब्यापी रुपमा कोभिड–१९ शताब्दीकै खत्ररनाक महामारिको रुप संक्रमण फैलिरहेको छ । नेपालमा पनि संक्रमणले भयाभह रुपमा लिदैछ । अर्थतन्त्र, जनजीबिका र बिकासमा क्रमस नकारात्मक सुचांक देखिदै छ । संक्रमणको स्थिती यथाबत रहे मुलुको भोकमरी र गरिबको चक्रब्यूँहमा फस्ने संकेत देखिदैछ ।
अमेरिकाको अनुदानमा संचालन हुने एमसिसी परियोजनालाई बिबादको बिषय बनाई नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्धमा अप्ठ्यारो श्रृजना हुने अबस्था देखिएकोछ छ । यसमा ‘…. सक्यो दैलो देख्यो’ भन्ने उखान चरितार्थ गरिदैछ ।
नेपाल र चीनबीच कृतिम सिमा बिबाद तब खडा गरिन्छ । जब नेपाल–भारत सिमा बिबाद, सन्धिको पुनराबलोकन र डुवानको बिषय ऊठछ, तब नेपाल चीन सिमाबिबाद तन्किन्छ । चीनलाई बिबादमा तान्निछ ।
यसपटक त यो संसदमा पनि प्रबेश गराउने प्रयत्न भएको छ । नेपाल–चीन सिमा बिबाद भारतीय अतिक्रमणको मुद्दा ओझेल पार्न नियतले गरिएको षड्यन्त्र मात्र हो नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध बिगार्ने प्रपन्च हो । यसमा सरकारले आफ्नो दृष्टिकोण प्रष्ट पारिसकेको छ । यदि समस्या भए दुई पक्ष बार्ताद्वारा हल हुने कुरा चीन र नेपाल सहमत नै छन । पार्टी र सरकारमाथिको चौतर्फी घेराबन्दीबाट मुक्त गर्ने पार्टी सरकार र जनताहरु एकतावद्ध हुनु आजको कार्यभार हो । पार्टी र सरकारको दायित्व हो ।
लामो प्रतिक्षापछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक बसिरहेको छ । बैठकको एजेण्डा सार्वजनिक नहुँदै दुई अध्यक्षबीचका बिबाद, बरिष्ठ नेता माधबकुमार नेपाल र ऊहाँको समुहबद्धता र असुन्तिष्टी बाहिरिएको छ । झन फाइट टु फिनिस हुने गरी लडने जस्ता कुरा बाहरिनु बास्तविक रुपमा दुर्भाग्य हो । पार्टी एकता, कम्युनिष्ट आन्दोलन र जनताप्रति धोका हो ।
यो एकताप्रति गद्दारी हुनेछ । अहिले नेकपाभित्र देखिएको पार्टी भित्तको शक्ति संघर्ष, गुटबन्दी, आग्रह, अधैर्यताले पार्टी बिशर्जन हुनेछ । पार्टी एकताको बेलामा गरिएको सहमतीय राजनीतिको अन्त हुनुको साथै पार्टी बिघटन हुनेछ । पार्टी बैठकमा जाँदा ओलीको असफलता देखाउन, पार्टीको पद र सरकारबाट ओली हटाउँन मोर्चाबंदी गरी जाने हो भने यो कम्युनिस्ट पार्टीको बैठक हुन सकदैन । यसो हुदा बुद्धि, तर्क, बहस र जनबादको कुनै अस्तित्व हुँदैन । मोर्चा र गुटको अपवित्र गठबन्धन मात्र हुनेछ । यसो गरिरहँदा एकछिन न्यानो त होला तर नतिजा कसैको हातमा रहने छैन । बिधी र प्रकृयाको कुरा सोजो मनले उठए पनि परिणाम जुन ताकत र शक्तिले कम्युनिस्ट पार्टी बिघटन गराऊन, फुटाउन र सरकार ढाल्ने बिभाजन कोरन ब्यक्ति फेर्ने षड्यन्त्र गर्दै छ ।
कतै त्यही शक्तिको अभिष्ट पुरा गर्न हामी ऊद्दत त छैनौ ? नेतृत्वले यति कुरा नबुझेको होला भन्न सकिदैन । बुझेको भए किन यतिसारो बैठक बाहिर गुटबन्दी र मोर्चाबन्दी गरिन्छ । पार्टी नेतृत्व किन सबै बुद्दि बिबेकलाई दाउमा राखी ओलीबिरुद्ध उनलाई असफल देखाऊन बाह्य शक्तिको एजेण्डालाई सहयोग पुग्ने गरी बैठकमा प्रबेश नगर्दै अतिरन्जित ढंगले प्रचार गरिन्छ । त्यसैमा केन्द्रित भएर छलफल चलाइन्छ ।
प्रतिकृयाबादीलाई खुशी पारिन्छ । कसलाई थाहा छैन ? भारतीय शासक गुट ओलीलाई पार्टी र सरकार दुबैबाट हटाऊन चाहन्छ । उस्का दुत बिभिन्न आबरणमा नेपालमा सकृय छन । हो आज भारत कम्युनिष्ट पार्टीलाई कमजोर बनाऊन ओली हटाऊँ आन्दोलनमा नेपालको हरेक ठाऊमा छ, क्रियशिल छ । भारत ओलीबिरुद्ध लाग्नु आधारभुत र तत्कालीन दुबै कारण मजबूत छन ।
यसबारेमा नेपाली राजनीतिमा सामान्य चासो राख्ने सबैले बुझेको कुरा हो । यो बिषय घाम जस्तै हुदाहुदै किन हाम्रो नेतृत्व अहिले बसिरहेको स्थायी कमिटीको बैठकबाट सरकारको असफलता देखाउने, सके दुवै पदबाट हटाउने, नसके एक पदबाट हाटाउन कसम खाँदै बैठकमा छलफल गरिदैछ । यसो गर्नमा बाह्य शक्ति र पार्टीभित्रका गुट र उपगुट एकैचोटी परिचालित भएको अनुभूत हुनु दुखद संयोग हो ।
आसा छ, आसन्न बैठकले सबै शंका आशंकालाई खारेज गर्दै पार्टी एकताको बाँकी काम समयमा नै सम्पन्न गरी पार्टीको सबै अगंलाई चलायमान बनाउने अठोट गर्नेछ । सरकारका राम्रा कामको रक्षा गर्दै पार्टी र सरकारको बीच सुमधुर सम्बन्ध कायम भई आउदा दिनमा आउन सक्ने सबैखाले चुनौती सामना गर्न पार्टी र सरकार सफल हुनेछ ।
सुदृढ पार्टी, सुदृढ सरकार, समावेशी सामाजिक न्यायसहित समाजवादी समाज निर्माण गर्न यो बैठक सफल होस । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बिग्रह हुन्छ, नेताहरु बिभाजित गर्न गोटी चाल्नेहरु पराजित गराउन यो बैठक कोशेढुगां साबित होस । पार्टी कार्यकर्ता र नेपाली जनताको चहान पूरा होस । सारा प्रतिकृयाबादीलाई सधैको लागि पराजित गर्न सकोस । यही शुभकामना ।
(लेखक पोखरेल पूर्वमन्त्री, नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा बागमति प्रदेश कमिटीका सचिव हुनुहुन्छ ।)
सरकारलाई गाली गरेर मात्र रोग नियन्त्रण हुन्न, नागरिक पनि जिम्मेवार हुनुपर्यो
हाल नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ चिकित्सक प्राडा. भगवान कोइराला शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय
बजेट निर्माणमा लागिपरेका स्थानीय तहलाई नेता खतिवडाको यस्तो सुझाब
स्थानीय तहहरु अहिले बजेट निर्माणमा धमाधम लागिपरेका छन् । संबिधानमै असार १० गते नगरसभा गरेर
युरोपको आँखी झ्याल
मुसलधारे पानी सँग पुर्व रसियन राजधानी ‘सेन्ट पिटर्सबर्ग’ रोई रहेको बेला नाताशाको गलबन्दीले अचानक उनको
कालापानीका तीन हजार जनताको आवाज
नेपालको इतिहासले ३१ जेठ शनिबारको दिनलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीक बनाएको छ । सन् १८१६ को